Ogaden News Agency (ONA) – Saraakiisha Tigreega & Odayaasha Soomaalida oo Siwayn Isu Maandhaafsan.
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in saraakiisha Tigreega ee wali xilalka haya ay culays wayn iyo cadaadis ku hayaan odayaasha Soomaalida ah ee kusugan magaalada Addis Ababa, kuwaas oo siwayn uga soo horjeeda maamulka gumaysiga u adeega ee Jigjiga fadhiya.
Sida xogta aan ku helayno saraakiisha Tigreega oo qaarkood ay kayimaadeen dibada wadanka ayaa doonaya in ay dhex dhexaadiyaan odayaasha iyo maamulka Jigjiga ee Tigreega ushaqeeya, waxaana lasheegayaa in soo jeedintaas ay odayaashu siwayn gaashaanka ugu dhufteen, waxayna odayaashu sheegeen in wax wadahadal ah aysan lagali doonin kooxda dhiiga shacabka kunaaxday ee Jigjiga.
Hase yeeshee saraakiisha maamulka Jigjiga samaysatay ee Tigreega ayaa odayaasha ugu hanjabay in ay talaabo kaqaadi doonaan hadii ay laheshiin waayaan maamul kusheega Jigjiga, waxaana lasheegayaa in odayaasha looqabtay wakhti ay arintaas kaga soo fikiraan.
Balse odayaasha ayaa si cad usheegay in dacwadoodu ay hortaalo Raysal-wasaaraha cusub ee wayaanaha, kaas oo baryahanba waday ol-ole uu rijiimkii hore ee wayaanaha meesha kaga saarayo, waxayna odayaashu sheegeen in hanjabaada saraakiisha aysan dhag jalaq usiin doonin.
Dhinaca kale saraakiisha Tigreega ayaa lasheegayaa in ay kuhowlan yihiin sidii ay usoo celin lahaayeen dagaalkii Soomaalida iyo Oromada ee kasocday xuduuda labada Gobol, kaas oo kooxda TPLF ay uhaysato in ay dan badan ugu jirto.
Sidoo kale saraakiisha Tigreega oo kaashanaya shirkad wadanka laga leeyahay oo macdanta baadha ayaa lasheegayaa in ay dahab aad ubadan wadanka kasoo saareen isla markaana ay dibada udhoofiyeen, waxaana lasheegayaa in dahabkan wadanka laga xaday laga sameeyay hanti aad ubadan taas oo la ogaaday in gacanta loogaliyay saraakiisha Tigreega.